ပျဉ်းမနားမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရားပွဲနှင့် နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့် သီတင်းကျွတ် မီး? - Yangon Media Group
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာ နှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူ ဘုရားပွဲနှင့် နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့် သီတင်းကျွတ် မီး?
ပျဉ်းမနား၊ အောက်တိုဘာ ၂၃
နေပြည်တော် ကောင်စီနယ်မြေ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာနှစ် ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပွဲနှင့် နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့်သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော် ကို စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်း ပလျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
နှစ်(၁ဝဝ)ပြည့်အထိမ်းအမှတ် သီတင်းကျွတ်မီးထွန်းပွဲတော်ကို အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက် (သီတင်း ကျွတ်လဆန်း ၁၄ ရက်)မှ စတင် ၍ ပျဉ်းမနားမြို့ပေါ်ရှိ ဝတ်ဖြူ တော်အသင်းရှစ်သင်းဖြစ်သည့် တပ်တွင်း၊ မြို့ဦး၊ နံတော်စဉ်၊ ရန် အောင်(၁)၊ ရန်အောင်(၂)၊ ရွာ ကောက်၊ ပဋ္ဌာန်း၊ တောင်သာဝတ် ဖြူတော်အသင်းများက ဦးစီး၍ ၂၈ ဆူသောဘုရားများကို ဌာနဆိုင် ရာများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ နှင့် ဝတ်ဖြူတော်အသင်းများက သုံးရက်တာ အလှပြမော်တော်ယာဉ် များဖြင့် ပင့်ဆောင်ကာ မြို့တွင်းသို့ လှည့်လည်ပူဇော်ခံခြင်းနှင့် မြန်မာ နိုင်ငံရှိ နာမည်ကြီးအဆိုတော်များ နှင့် သီဆိုဖျော်ဖြေခြင်းတို့ဖြင့် စည်ကားသိုက်မြိုက်စွာ ကျင်းပကြသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်လုံးဆိုင် ရာနှစ်ကျိပ်ရှစ်ဆူဘုရားပွဲနှစ် (၁ဝဝ)ပြည့်သီတင်းကျွတ် မီးထွန်း ပွဲတော်အထိမ်းအမှတ်ကျင်းပရာတွင် ပျဉ်းမနားမြို့ ရန်အောင် (၂)ရပ်ကွက်ရှိ ဘုရားကိုးဆူအနီး မင်္ဂလာရှမ်းကန်ပတ်လည်၌ မီးအ လှဆင်ခြင်းများ၊ ရာပြည့်အထိမ်း အမှတ်ကျောင်းပေါင်းစုံမှ ကျောင်း သား၊ ကျောင်းသူများ၏ပန်းချီ၊ ကာတွန်း၊ ဆောင်းပါး၊ စာစီစာကုံး၊ Logo မှ ပြိုင်ပွဲဝင်လက်ရာများနှင့် ဆုရလက်ရာများ၊ ပျဉ်းမနားမြို့ သီတင်းကျွတ်ဘုရားပွဲတော်သမိုင်းမှတ်တမ်းများ၊ ဗုဒ္ဓဝင်ပြခန်းများ၊ ပျဉ်းမနားမြို့မှ ထင်ရှားကျော် ကြားခဲ့သည့်ပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် မှတ် တမ်းဓာတ်ပုံများ၊ ပျဉ်း မနားမြို့မှ မြန်မာမှုလက်ရာပန်းပုပြခန်းများ၊ ဒေသထွက်စားသောက်ကုန်ပစ္စည်း များစသည်ဖြင့် ပြခန်းများပြသ ထားသည်။
သီတင်းကျွတ်ပွဲတော်ရက်အ တွင်း နေပြည်တော်ကောင်စီနယ် မြေအတွင်း မြို့နယ်များရှိ တန်ခိုး ကြီးဘုရားများတွင်လည်း ဥပုသ်သီလ ဆောက်တည်ခြင်း၊ ညပိုင်းတွင် ဆီမီး ၉ဝဝဝ၊ ၅ဝဝဝ ၊ ပန်း ၅ဝဝဝ၊ ရေချမ်း ၅ဝဝဝ၊ နံ့သာ ၅ဝဝဝ ပူဇော်ခြင်းများ ပြုလုပ်ကြကြောင်း သိရသည်။
”ကိုယ်လုပ်ခဲ့တဲ့ အမှားကို ဝေဖန်လို့ ရပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ Sexy ပုံတွေ မရိုက်ဖြစ်တော့ပါဘူး’